गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » नेपालमा ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्ट एकबाट १० जनामा सार्ने क्षमता, यस्ता लक्षण देखिनेछ
काठमाडौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टको सङ्क्रमण अन्यभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा आबद्ध रहेका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. जनक कोइराला ओमिक्रोन भेरियन्ट (तेस्रो लहर) ले पहिले देखिएको भेरियन्टको तुलनामा धेरै मानिसलाई सङ्क्रमित बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ओमिक्रोन भेरियन्ट एक जनाबाट १० जनामा सङ्क्रमण सार्ने गरेको पाइएको छ ।
हिजो एकैदिन तीन हजार ७५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । ओमिक्रोन भेरियन्टबाट बच्नका लागि व्यक्ति आफू नै सजक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने रोग भएकाले यसबाट बच्न आफू नै सर्तक हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्‍यो भने सायद यसले व्यापक रुप लिँदैन ।”
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नलगाउने व्यक्तिमा लगाएकोभन्दा १० गुणाबढी सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।